Iyadoo aan sameeynay waxqabad xooggan hay'ad tarjumaan ahaan sanado badan, SunFlare waxay ku qanacsantahay in ay la noqoto shuraako caqli gal ah macaamiisheeda.
Waxaan bixinaa adeegyo ballaaran oo loo qoondeeyay inay daboolaan baahiyaha diiwaangelin ee shirkadaha ka shaqeeya dhammaan dhinacyada ganacsiga
Waxaan awood u leenahay in aan macaamiisheena siino xalalka ugu wanaagsan innagoo aqoonsanayno oo xalinayno caqabadaha la xiriira diiwaangelinta si dhakhso ah oo sax ah.
Agoosto 1, 1971
Xafiiska Dhexe ee Tokyo
Qoraalka (farsamada iyo caafimaadka)
Adeegyada hal abuur (naqshada, DTP, shabakada iyo muuqaalka)
Cilmi-baaris (shuruurcda, qawaaniinta, heerarka iyo shatiyada)
Taageerada fayl garaynta iyo codsiga (shatiyada, arrimaha sharciyeynta iyo qalabka caafimaadka)
Imtixaanka U-qalmitaanka Tarjubaanka (TQE)
Aqoon-isweydaarsiyada (shatiyada iyo qalabka caafimaad)
ISO 27001, ISO 9001, ISO 17100 iyo Astaanta Qarsoodiga (JIPDEC)
Shati-haystaha Ruqsadda Suuq-geynta ee Adeegyada Caafimaadka Nooca II
Lagu xaqiijiyay ISO 27001 iyo ISO 9001
Macaamiishayadu waxay leeyihiin baahiyo kala duwan oo dokumeentiyada ah. Si aan u hubino inaan leenahay qaabdhismeed adag oo amniga ah loogu talogalay inaan ku helno aana ku gudbino xogta macmiilka qarsoodiga ah iyo in aan bixin karno heerka tayada ugu sareeysa, waxaan u hoggaansanay nidaamyada maareynta caalamiga ah oo kala duwan.
Khibrad u leh warshado kala duwan, ganacsiyo iyo laan cilmi
Si loo hubiyo inaan sii ahaano shuraako ganacsi la isku halleyn karo, khabiirada iyo kooxaha takhasuslayaasha laamaha cilmiga ee warshadeena ayaa si wadajir ah u siiya macaamiisheena xalalka ugu wanaagsan ee caqabadaha ay wajahayaan.
Aqoon u leh in ka badan 70 luuqadood
Haddii shirkad kaligeeda rabto inay ganacsigeeda ku horumariso duluc caalami ah, waxay u baahantahay inay taqaano luuqadaha iyo dhaqamada dhammaan dalalka ay bartilmaameedsanayso. Tani waxay si cad u noqon doontaa hab wax ku ool u ah ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee, SunFlare ahaan waxaan leenahay khabiiro yaqaano in ka badan 70 luuqadood oo sidoo kale aqoon fiican u leh dhaqanka goobaha luuqadaha laga isticmaalo. Waxay siin karaan macaamiisheena taageerada ay beegsanayaan, waqtiga loogu talagalay ay u baahan yihiin inay u guuleystaan ganacsi caalami ahaan. Khabiiradayadu waxay aqoon ballaaran u leeyihiin laamaha aqoon oo gooni ah ay wehliyaan xirfadaha luqadda ee fiican, taasoo naga caawineysa inaan bixino adeegyo tayo leh, degdeg ah oo loogu talogalay dukumiintiyada u baahan baahida heerka sare ah, sida dukumiintiyada sharciga, maqaalada, iyo codsiyada sharciyeynta.